Ezona ndawo ziGqwesileyo ziFakelwe kwi-WTM ngo-2021
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iintlanganiso » Ezona ndawo ziGqwesileyo ziFakelwe kwi-WTM ngo-2021
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iintlanganiso • iindaba • abantu • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK
Ezona ndawo ziGqwesileyo ziFakelwe kwi-WTM ngo-2021.
Ezona ndawo zobugcisa, ezinobukrelekrele kunye nezibalaseleyo kwi-WTM London ziye zabhengezwa, kunye neendawo ezinje ngeCanary Islands, iIreland kunye neSaudi Arabia phakathi kwabaphumeleleyo.
Iphaneli yeejaji ezine ezizimeleyo ezizimeleyo zatyhila abaphumeleleyo kwiWTM London 2021 Best Stand Awards ngoLwesithathu we-3 kaNovemba.
Abagwebi babenguPaul Richer, uMlingani oMkhulu kwiGenesys Digital Transformation; UKim Thomson, uMlawuli wokuPapasha kwiiNdaba zokuHamba kunye nezoKhenketho kuMbindi Mpuma (TTN); UBill Richards, uMlingane oPhezulu kuPhando loKhenketho kunye neNtengiso (TRAM); kunye noMartin Fullard, uMlawuli woHlelo kwiMash Media.
Inqanaba lesithandathu – iPeople’s Choice – liza kuvotelwa ngabathunywa beWTM ngoFacebook noLinKedin.
Obona bugcisa, bukrelekrele kwaye buhlabayo bumi IWTM yaseLondon ziye zabhengezwa, kunye neendawo zokusingwa ezifana neZiqithi zaseCanary, eIreland naseSaudi Arabia phakathi kwabaphumeleleyo.
Ophumelele uYilo oluNgcono lweSimandi yayiziQithi zaseCanary (EU600), ezazinconywa “ngomxube ochanekileyo wobugcisa kunye nabantu”.
Abagwebi bancome ukuyilwa kwamaza akhanyayo kwisilingi yesitendi kunye nezangqa ze-LED emgangathweni, eziphawula iindawo zendibano.
“Izikrini ezichukumisayo bezilungile kunxibelelwano kwaye zihamba kakuhle,” zihlomle iijaji.
Intengiso yoKhenketho lwaseBarbados (CA220) inconywe kakhulu “ngokusetyenziswa kwayo kakuhle kombala okwenze ilizwe libe nemvakalelo yokwenyani”, longezelele igqiza labagwebi.
I-Tourism Ireland (UKI200) iphumelele ibhaso le Esona Simendi Sokwenza Ishishini, njengoko iijaji zathi imele indawo ekuyiwa kuyo "ngobuhle" ngelixa idala "umoya oxakekileyo we-B2B".
“Kwakulula ukuhambahamba kwaye neetafile zazibhalwe kakuhle. Indawo eyenziwe ngamatye yakwenza waziva ukuba useDublin,” zatsho iijaji. “Uyilo lwalucetywe kakuhle.”
Iintlobo ngeentlobo zeeCruise (TP101) ibiphumelele i Eyona ndawo iNtsha yokuma imbeko, ngenxa yomzekelo wesikhephe, ukusetyenziswa kakuhle kwendawo kunye nevidiyo echaza imveliso ngokucacileyo.
Iijaji zagqabaza zathi: “Ithathe ithuba elipheleleyo lendawo entle kwaye uyilo ubuthambileyo obukumemela etafileni.
The Eyona NONE yaphunyelelwa yi UGunyaziwe woKhenketho waseSaudi (ME550 - ME450 - ME400).
Abagwebi bathi: “Indlela emajikojiko iyakuthabatha ekuhambeni kwexesha. Kwavakala njengokuhamba kwimbali ukusuka kwiintsuku ze-Bedouin ukuya kwixesha langoku elimele umbono wabo we-2030.
“Yayisisenzo esinempembelelo esineempawu ezitsala amehlo ezikhuthaza iindwendwe.”
Ingcali yentlawulo ye-Intanethi I-Ecompay (TT300) Phu melela Uyilo olugqwesileyo lokuma at Ukuhamba Phambili -umboniso wetekhnoloji yohambo ebekwe kunye neWTM London.
Isigwebo esivela kubagwebi kukuba ukuma "kwakufudumele kwaye kwamkelekile", siyabonga ngokuyinxalenye kwibar kunye nemiboniso yeentyatyambo.
“Ulwakhiwo lwentsimbi lwaluyintsha kwaye lwalucace gca kwaye kulula ukuyiqonda kanye into abayenzayo”, lihlomle iqela labagwebi.